DAAWO: Xildhibaan Idiris Cabdi Taktar oo u jawaabay C/wali Gaas” Maskaxiyan ma fiyoobo”,
September 21, 2018 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta, Wararka Puntland iyo Somaliland 7
Madaxweynaha Puntland Cabdi Weli Maxamed Cali Gaas, oo ka hadlayey magaalada Badhan ee gobolka Sanaag, oo uu booqasho ku joog, ayaa u gafay oo aad u liiday dadka kasoo jeeda gobollada Baay iyo Bakool, sida ku cad muuqaal laga duubay baraha bulshada lagu baahiyey.
“Wiil ka yimid Xudur, Diinsoor iyo Buurhakaba, oo qaba kaba dacas ah inuu dalkayga iigu yimaado, iguna xukumo ma aqbali karo mana dhici doont” ayuu yiri Cabdi Weli Gaas, oo sida muuqata liidaya dadka dega gobollada Baay iyo Bakool.
Hadalkaan uu jeediyay madaxweynaha Puntland oo Xasaasiyad abuuray ayaa waxaa ka hadlay Mas’uuliyiin ka soo jeeda Maamulka Koonfur Galbeed oo xilal kala duwan ka haya Dowladda Federaalka.
Xildhibaan Idiris Cabdi Dhaqtar ayaa waxa laga xumaado ku tilmaamay hadalka madaxweyne C/wali Gaas.
Ashabaab waa dadka kayimada baydhaba ee dacaska wata waarun ee dgexmushaxsya puntland waa in aad la isaga ilaaliyaa 100 dolar kii la siiyo wuu isqarxiyaa jeegaanta soo dira si loo burbiriyo puntland jeegaanta dagaal way bay kulajiraan punland.waayo burco iyo hargaysa ma qariyaan. Waxaa kaaga daran. Waadad iska guur guura merlwalba intay taagan baa lamakalyaqan mid fiican iyo mid toosa. JEGEENTA si ay citiraafka eenta uhelaan waxay kashaqeeyaan inay lacag kubixiyaan waxwalba oo muqdisha iyo boosaaso ama puntland amnidaro kadhigaya. Waxay rabaan in xataa laascaano xoog kuhaystaan oo puntland ku mashquuliyaan ashabasb koonfurgalbeed waa inay dadkooda ceshedaan. Oo kunoqdaan dhulkoodii. Reer puntland kama shaqaystaa baydhaba maxay kasoo doonaan puntland wa dadbarakacayaal puntland amaanka khalkjalgalinaya madaxweynaha waa sax an yahay iyagoo dacaska wata bay merlwalba wareegaya an waa wada jaajuus raqiisa. Ogaada.
Waa xanuusan tahay ee ilaaheey haku caafiyo aamiin
Anigu waxaan garan la ahayn dadka siday u fahmi la ayihiin ninkaan inuu waalanyahay y waa cadahay laakiin dadka waxaa dilay waa qashinka caadaqaatayaasha aan daacada ahayn ee Xubnaha Baarlamaankaas.
Ninkaan Galtida ah maskaxdiisa wareersan waxaa ku wareegaya inuu Punland hogaamiyo hogaan daacad ah iyo horumar midna aan u keeneyn nasiib daro
Hadii ashabaab lacaayo way xanaaqaan kuwa uu kahadlaya madaxweynha waa kuwa qarqarka kuwata jawanada iyo dacaska ee meelwalbaba wareegaya oo garabraratada ah ee maha kuwa wanaagsan ee yar .hadalka waa inay saas ugahmaan tankale koonfurgalbeed. Ashabaab waa meesha ugubadan ee ay deganyihiin. Degmowlbawaajogaan.haday run shegataan maxaa degaankooda kasoo erya may joogaan ki danbi kasoo gala baydhaba wuxuu yimaadaa puntland. Ogada ashabaab. Dacaska caan bay ku yihiin waayo masaakiin bay is kadhigaan Markay imansyaan kadib dagaal hoose bay bilaabaan. Warka ayagaa ugidbiya ashabaan Telefonica bay wataan melwalba waa joogaan waxaa loo isticmaala.jaajusiun raqiisa. Waxayna katirsantihiin xisbi walba oo diniya oo somaliya kajira waa run in somali somali tahay lakiin puntland waxay kadhigteen gabaad mudo dheer. Barakacayaasha ogaada. Shaqooyinka hoose bay qabtaan laakin shaqo kasta hadii lacag la siiyo way fuliyaan waa masaakiin ashabaab kushaqaystaan tankale. Xildhibanada qaarbaa ka xun horumarka puntland oo kulajira maxay puntland maamul u leedahay. Waayo kuwa kale ashabaab baa haystaan dhamaan koonfurgalbeed galmudug hirshabeele jubaland. Muqdisho canshuurta qaataan. Dadka ladilaa xataa fiqi cabdiraxman cabdishakuur kamahalaan ashabasb waxay kahadlaan dawkadnimda iyo sidii loo burbiriyo ahaa.
DHAKHTARKA WAALIDA HA GEEYAAN PUKANLAAN AMA CILAAJYADA DONAL TRAP BUU ISU MALAYNAYAA OO WAASHINTON JOGA
@ Suldaan Prof Cusman Cawad ”’ Royal Family ”’ May Allah Bless him ”’
JIMCE WANAAGSAN………………….JUMCA MUBAARAK
Suldaan Salaan sharafti Saldanadda Maakhir Coast.
”’ Read My Emails ”’ Suldaan